मंसिर २८ गतेदेखि गुरुकुलमा ‘छिडीभरिको आकाश’ |मंसिर २८ गतेदेखि गुरुकुलमा ‘छिडीभरिको आकाश’ – हिपमत
बिराटनगर ,मंसिर २६ गते ।
प्रसिद्ध आख्यानकार परश’ प्रधानको कथामा आधारित ‘छिडीभरिको आकाश’ नाटक आरोहण ग’?क’लमा मञ्चन ह’ने भएको छ .
विराटनगर हाटखोलास्थित आरोहणको स’शीला कोइराला नाटकघरमा यही मंसिर २८ गते शनिबारदेखि नाटक मञ्चन ह’न लागेको हो . विराट आदर्श साहित्य मञ्चले तेस्रो पटक छिंडीभरिको आकाश नाटक मञ्चन गर्न लागेको हो . द’व्र्यसनवि?द्ध यो नाटकले दर्शकको मन जित्ने आयोजकको दाबी छ . यसअघि २)७४ सालमा २ पटक सो नाटक मञ्चन भइसकेको छ . दर्शकबाट अत्यधिक ?चाइएको नाटक छिडीभरिको आकाश दोस्रो पटक मञ्चन भए पनि समय अभावका कारण सबै दर्शकले हेर्न पाएका थिएनन् . छिडीभरिको आकाश नाटकमा क’लतमा फसेको परिवारको चित्रण गर्न’का साथै आर्थिक रूपमा विपन्नको परिवारको वेदनालाई देखाइएको छ .
विराट आदर्श साहित्य मञ्चको प्रस्त’ति रहेको नाटकको नाट्य रूपान्तरण र निर्देशन कटवाल दीपकले गरेका छ्न भने सहनिर्देशन रमेश तिमल्सिनाले गरेका छ्न . मञ्चन ह’न’ अगावै २) वटा शो ब’किङ भैसकेको र अन्य स्क’ल कलेजहरूले चासो देखाइरहेको मञ्चका प्रम’ख सल्लाहकार मीनक’मार नवोदितले जानकारी गराए . ‘स’?मा एक हप्ताका लागि तयारी गरिए पनि विभिन्न विद्यालय र क्याम्पसबाट समेत माग भएपछि मञ्चन ह’ने समय बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘यो नाटकले मानिसलाई सही मार्गमा लाग्न उत्पे्ररित गर्दछ .’
नाटकले ऐतिहासिक सफलता पाउने मञ्चका अध्यक्षसमेत रहेका निर्देशक दीपक दाबी गर्छन् . ‘म’नामदनजस्तै यो नाटक पनि आमदर्शकको मन र म’ट’मा बस्न सफल ह’नेछ,’ दीपकले भने . छिडीभरिको आकाश प्लस ट’को पाठ्यक्रममा समेत समावेश छ .
नाटकमा सन्देश बाराकोटी, अन’सा कटवाल, रमेश तिमल्सिना, अनिल खत्री, एन्जल बस्नेत, उमेश पौडेल, माजिद अन्सारी, पार्वती कटवाल, अन’सा भण्डारीले अभिनय गर्ने छन् भने व्यवस्थापनमा प्रभा पन्त र विवेक आचार्य रहेका छन् . विराटनगर महानगरपालिका प्रवद्र्धकका रूपमा रहेको छ भने म’ख्य प्रायोजकमा काबरा ग्र’पको ब’लेट चाउचाउ, प्रायोजकमा नमस्कार होटल म्यानेजमेन्ट स्क’ल र सहप्रायोजकमा सोम्स कलेज रहेका छन् . नाटकका लागि मोरङ हिसान र प्याब्सन विराटनगरले सहकार्य गरेका छन् . मञ्चले यसअघि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कृतिमा आधारित ‘म’नामदन’ नाटक मञ्चन गरिसकेको छ .
बिहिबार, मंसिर २६, २०७६मा प्रकाशित गरिएको